Kaominina Toamasina I :: Nosoloina Filohan’ny delegasiona manokana i Elysé Ratsiraka • AoRaha
Kaominina Toamasina I Nosoloina Filohan’ny delegasiona manokana i Elysé Ratsiraka
Nisoko mangina ny raharaha. Nivoaka tamin’ny 10 avrily 2019 lasa teo, ny didin’ny Fitsarana misahana ny ady ifanaovana amin’ny fanjakana, izay mametraka Filohan’ny delegasiona manokana hisolo toerana ny Ben’ny tanànan’i Toamasina voalohany, Ratsiraka Elysé. Mialoha ny fivoahan’ity didy ity dia nisy ny fitondran’ireo mpikambana eo anivon’ny Filankevitra monisipaly ny vaditany nanamarika ny fahabangan-toeran’ ny Ben’ny tanàna. Natolotra ny Fitsarana misahana ny ady ifanaovana amin’ny fanjakana izany avy eo, ka nahatonga an’izao fandraisana fanapahan-kevitra izao.
An-kilan’izay, efa nanendry ny lefiny hisolo toerana azy vonjimaika ity Ben’ny tanànan’i Toamasina ity. Nambaran-dRatsiraka Elysé fa: «amin’ny maha kandidà depiote azy dia efa nisy ny fahazoan-dalana manokana hiala sasatra nomen’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni)».
«Mihatra avy hatrany io fahazoan-dalana io vantany vao nivoaka ny lisitra ofisialin’ireo kandidà depiote. Mitombina ho an’ireo ben’ny tanàna kandidà rehetra izany », hoy izy. Na izany aza, milaza ny tsy hanaiky izao fomba nanesorana azy amin’ny toerany izao anefa i Ratsiraka Elysé, ka hitondra ny raharaha eo anivon’ny sehatra ambonimbony kokoa.
Le Pave Antaninarenina :: Fety sy koràna firaisankina hiarahan’ireo zanak’i Bongolava
Fitaovam-piadiana :: Sarona ny basy telo saika hamidy any Sambava